Kutanya - Wikipedia
Shoko rokuti kutanya rinoreva kudhonzwa kunoitwa nyama dziri pakati penyini kuti dzirebe kuita matinji. Iyi itsika inoitwa nechimwe chikamu chevakadzi vechitema zvikurusei kuChamhembe kweAfrica. Kutanya kunotanga kuitwa vasikana vachiri vechidiki kumazera emakore 12-13 ekuzvarwa. Matinji anogadzirwa sezviro zvokutamba nazvo pabonde kubatsira kumutsa nyama dzemukadzi kuti dzisekese nokuregeredzera murume asati apinda. Panguva iyi mukadzi ndipo anotanga kunyorova kuzasi nyama dzake dzichivhurika. Vamwe varume vanofarirawo kutamba vachibata zviro izvi.
Kuti nhau yokutanya inzwisisike zviri nani tinofanira kukurukura kaumbirwo kakaitwa nhengo yechidzimai sokuonekwa kwainoitwa nechekunze.
Mukana ndiro buri rekuzvara naro rinova ndiro rinopinda nemboro yemurume panguva yebonde. Buri rekuzvara rinopinda mukati mumuviri richikwira nemuteremuko ungaita 45o. Kwaunoperera mukana uyu kunovharwa rhingi yemhasuru inodaidzwa kuti cervix kuEnglish. Mukana wakaumbiridzwa nenyama dzinotatamuka panguva yokuzvara uye panguva yebonde.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Kutanya&oldid=33746"
This page was last edited on 17 Kubvumbi 2013, at 11:29.